Xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo saddex xiddig u diray Ruushka si ay qayb ugu noqdaan furtiaanka koobka adduunka – Gool FM
(Muqdisho) 07 Juunyo 2018 Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaa ka amba baxay saddex ciyaaryahan iyo madax Wafdiga Yuusuf Xuseen Muumin, iyagoo ku sii jeeda dalka Ruushka.
Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta oo aan garab ka hellin cid aan ahayn FIFA ayaa sii laba jibaaraya dadaalka lagu hor marinayo kubadda cagta dalka.
Xiddigaha Muqdisho ka amba baxay ayaa kala ah Sakariye Axmed oo qarankeena 17 jirada ugu ciyaaryay booska saddexaad, C/laahi Cali oo isna ah garabka midig ee daafaca, goolhaye C/raxmaan Maxamed oo turjumaan ah iyo madaxa wafdiga Yuusuf Xuseen Muumin sida uu inoo sheegay Cali Shiine oo ah guddoomiye ku xigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya
Xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa sanadkaan hir galiyay qorsho cusub kaa soo ah in min laba xiddig laga soo diro wadan walba, si ay loo xoojiyo is dhex galka dhalinyarada kubadda cagta.
Sadexda ciyaaryahan ayaa ka mid ah dhalinyaradii lagu soo soo saaray xarunta tababarada xiriirka, Waxaana dhalinyaradani ay qeyb ka noqonayaan xiddigo da’dooda ah oo caalamka laga kala keenayo looguna tala-galay in ay isku bartaan kuna saaxiibaan kubada cagta.
Dhallinyaro laga soo xulay 211 wadan ayaa qayb ka noqon doono furitaanka tartanka iyagoo 9 ilaa 13 bishaan ay ciyaari doonaan kullamo saaxiibtinmo,waxaana dal walba ku soo aaday min laba ciyaaryahan.
Xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo warqad codsi ah loo soo diray ayaa loogu dalbaday in ay keenaan laba xiddig oo da’yar kuwaas oo ka ciyaara labada garab ee daafaca.
Taariikhda Koobka Adduunka oo Kooban…(QEYBTA 17-AAD)+SAWIRRO